∎ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘယ်လို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အများဆုံးလဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း ∎ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘယ်လို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အများဆုံးလဲ ?
∎ “ဒုက္ခမြေပုံ” လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
❖ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကို ပိတ်ပင်မှုအပါအဝင် ကျေးရွာတွေ မီးရှို့ခံရတာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စတွေ ဖျက်ဆီးခံရတာစတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ “ဒုက္ခမြေပုံ” လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြလာပါတယ်။
❖ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) နဲ့အတူ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီး အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကို ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လာတာပါ။
❖ အဲ့ဒီ “ဒုက္ခမြေပုံ” လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Previous articleရေနံချောင်း-ချောက်မှာ မိုးခေါင်လို့ နှမ်းနဲ့ မြေပဲ စိုက်ပျိုးမြေဧက အများအပြား ပျက်စီးဆုံးရှုံး
Next articleUEC က ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အသုံးပြု၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်မှုကို ကန့်သတ်